ग्लोबल टि–२० लिगः सोमपाल र सन्दीपको टिममा को–को छन् स्टार क्रिकेटर? – Everest Dainik – News from Nepal
ग्लोबल टि–२० लिगः सोमपाल र सन्दीपको टिममा को–को छन् स्टार क्रिकेटर?
काठमाडौं, साउन १४ । क्यानडामा जारी ग्लोबल टि–२० लिगअन्तर्गत आज नेपाली क्रिकेटर सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेको टिम भिड्दै छन् । सोमपालआवद्ध विनिपेग हक्स र सन्दीपआवद्ध टोरन्टो नेशनलबीचको खेल आज राति १०ः१५ बजेदेखि सुरु हुँदैछ ।
खेल भारतीय च्यानल स्टार नेटवर्क र अनलाइनमा हटस्टारमा देख्न सकिने छ । सुरुवातका २–२ खेल गुमाइसकेका सन्दीप र सोमपालले आज हुने खेलमा मौका पाउन सक्ने छन् ।
सन्दीप–सोमपालआवद्ध दुवै टिमले समान एक खेलमा हार एकएक खेलमा जीत हासिल गरेका छन् । हालसम्म यी दुई टिमबीच एक पटक खेल भएको छ । जसमा सोमपालआवद्ध टिम ५६ रनले विजयी भएको थियो ।
ट्याग्स: ग्लोबल टि–२० लिग, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी